Dahaarka Warshadaha - Warshadda Macdanta Qingdao TianHua Yihe
Awoodda Dahaarka Warshadaha
Coatings Powder Coats ayaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay suuqa bartamihii 1950-meeyadii. Dhammaadkii ugu horreeyay waxay ahaayeen thermoplastic, kaas oo lagu dabaqay dhumuc weyn oo filim ah waxayna siisay meelo kooban oo arjiga ah. Maanta budada badankood waa heerkulbeeg, ku saleysan midkood Epoxy iyo ama nidaamyada cusbi Polyester. Dahaarka budada ayaa lagu cadeeyay inay yihiin kuwo qiimo ku ool ah iyo beddelka wasakhda wasakhda leh ee rinjiga ku saleysan warshadaha.
Rasaas goos goos ah
Qarax toogasho waa hab loo isticmaalo in lagu nadiifiyo, lagu xoojiyo ama lagu nadiifiyo birta, taas oo ah geedi socod farsamo oo looga saarayo nijaasta noocyada kala duwan dusha sare iyadoo la isticmaalayo aaladda. Waa geedi socod muhiim ah oo kahortaga dusha sare iyo waliba horay u diyaarinta meelaha dusha sare ka hor geedi socod dheeri ah, sida alxanka, midabaynta, iwm.
Ciideynta ama kuleylka kuleylka waa eray guud oo ku saabsan habka jilitaanka, qaabeynta iyo nadiifinta dusha adag iyadoo lagu qasbayo walxo adag dusha sare xawaare sare; Saameyntu waxay lamid tahay tan la adeegsado warqadda ciidda, laakiin waxay bixisaa xitaa xitaa dhammaystir la'aan iyadoo aan wax dhibaato ah laga qabin koonayaasha ama crannies. Sandblasting waxay u dhici kartaa si dabiici ah, badanaa natiijada ka dhalata jajabyada ay dabayshu keento nabaad-guurka aeolian, ama si dabiici ah, iyadoo la adeegsanayo hawo is cufan.
Rinjiga ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee la isticmaalo si loo ilaaliyo birta. Nidaamyada rinjiga ee qaababka birta ayaa la sameeyay sanadihii la soo dhaafay si ay ugu hoggaansamaan sharciga deegaanka ee warshadaha iyo ka jawaab celinta dalabaadka ka imanaya buundada iyo milkiilayaasha dhismaha si loo wanaajiyo waxqabadka cimri dherer. Qeexitaannada casriga ahi badanaa waxay ka kooban yihiin dalab isku xigxiga oo ah midabbada ama midabbada kale ee lagu mariyo dahaadhka birta si ay u sameeyaan nidaam daahan 'duplex' ah. Nidaamyada rinjiga ee difaaca badanaa waxay ka kooban yihiin aasaaska, jaakadaha iyo jaakadaha dhammeeya. Caadi ahaan, lakab kasta 'daaha' ee nidaam kasta oo ilaalin ah wuxuu leeyahay shaqeyn gaar ah, noocyada kala duwanna waxaa lagu dabaqayaa taxane gaar ah oo asaasi ah oo ay ku xigto jaakado dhexdhexaad ah / dhismo dukaan ah, iyo ugu dambeyn dhammaystir ama jaakad sare ah dukaanka ama goobta.
Iyadoo qayb ka ah ballanqaadka Qingdao TianHua ee ah inay u fidiso macaamiisha wax soo saar adeeg buuxa ah, waxaan cusbooneysiinay qadka daahan ee lagu maareeyo dhammaan rinjiyeynta warshadaha iyo shaqooyinka qarxa. Qolkeenna rinjiga wuxuu u oggolaanayaa maaraynta hawo sare iyo xakamaynta wasakhda, waana lagu dhammaystiray wiishyo kala duwan iyo muuqaalka dubo-ku-daweynta oo ku dhammaynaya dhamaadka tayada tayada rinjiga. Buuxinta baahiyaha deegaan wax soo saar sare leh, rinjiyeynteena warshadeed ee shahaadeysan, howlaha qarxinta iyo dahaadhka budada ayaa la shaqeyn kara alaabooyinka cabiraya ilaa 3.5m × 1.2m × 1.5m